Muqdisho: “Waxba igama hortaagna inaan guddi doorasho magacaabo” Madaxweyne Shariif. – Radio Daljir
Maajo 1, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, May, 01 – Khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya madaxweynaha DFKM Soomaaliya iyo afhayeenka baarlamaanka ayaa mar kale sii laba lixaadsamay, xilli ay muuqanayeen isku dayo lagu doonayo xal ku aaddan mas?alada uu ismaandhaafku ka aloosanyahay.
Madaxweynaha DFKM Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed ayaa ku gacansaydhay guddiga doorashada ee uu dhawaan magacaabay afhayeenka baarlamaanka DFKM Soomaaliya Shariif Xasan Sh Aadan, waxana uu madaxweyne Shariif sheegey in aanuu guddoomiye Shariif Xasan Sh Aadan daw iyo awood u lahayn magacaabidda guddi doorasho, maadaama buu yidhi uu yahay murashax madaxweyne.
Madaxweyne Shariif ayaa si kulul u sheegey haddii uu Shariif Xasan, guddoomiyaha baarlamaanka oo sheegey in uu u taaganyahay tartanka madaxweynenimo ee doorashada soo aaddan uu magacaabay guddi doorasho, aanay isaga (madaxweyne Shariif) jirin wax ka hortaagan in uu dhankiisana guddi doorasho magacaabo, taasoo uu sheegey in uu ku dhaqaaqayo, haddii ay arrimuhu sidaas ku socdaan. M/weynaha ayaa hadalkan sheegay mar uu shalay ka qaybgalay shir ay yeesheen golaha wasiirrada ee dawladda federalka.
Ismaandhaafka siyaasadeed ee sii badanaya una dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaanna madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaraysa rajo kasta oo laga qabi karayay in si sharci ah lagu hago hannaanka dowliga ah ee federaalka Soomaaliya.
Dagaal xooggan oo ciidanka dawladda iyo Al-shabaab ku dhexmaraya magaalada Garbahaarey, Gedo.